‘राष्ट्रपतिका सबै निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ’ - Paschimnepal.com
☰ open Loading... 25 June 2022| शनिबार, असार ११, २०७९
‘राष्ट्रपतिका सबै निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ’
राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो विषय ‘सेटल’ गर्ने प्रष्ट बाटो संविधान हो । संविधानको कुन–कुन धारा त्यहाँ आकर्षित हुन्छन्, तिनका सम्भाव्य पक्षहरु के छन्, ती आफैंमा कति स्पष्ट छन् हेर्नुपर्छ ।
तिनको पूर्व प्रयोग भएको छ भने कसरी भएको छ, तिनको नजिर के छ र यदि कुनै ठाउँमा अस्पष्टता छ भने त्यसको स्पष्टताको लागि संविधानविद्ह‍रुसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
निर्णय आफ्नो हुन्छ, तर सकेसम्म सबै पक्षका मान्छेहरु समेटेर सल्लाह लिने, कुरा सुन्ने गर्नुपर्छ र नोट गर्नुपर्छ । यो सबै विषयमा राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्न सचिवालय हुन्छ, त्यसमा संविधान र कानूनका ज्ञाता, प्रशासकदेखि पहिलेका ज्ञान भएका मान्छेहरुसम्म हुन्छन् ।
तिनले नोट बनाइदिन्छन् र त्यसले निर्णय लिन, एउटा टुंगोमा पुग्न राष्ट्रपतिलाई सघाउँछ । र, राष्ट्रपतिका सबै निर्णयहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । भोलि पब्लिकलाई देखाउनुपरेको स्थितिमा यो–यो कारणले, यो–यो आधारमा यसरी निर्णय गरिएको हो भन्न सक्नुपर्छ ।
त्यसमा कुनै विवादका कुराहरु छन् भने तिनको निरुपण गर्नुपर्छ । कानूनी र संवैधानिक सवाल छ भने सर्वाेच्च अदालतले गर्छ । राजनीतिक सवालहरु छन् भने सरकारले गर्छ, राजनीतिक दलहरुले गर्छन् । विधायनसम्बन्धी कुनै कुरा छन् भने संसदले गर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति स्वयंले त्यहाँ आफ्नो तोकिएको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो ।
आम जनताले के विश्वास गर्छन् भने राष्ट्रपति संस्थाले संविधानको शब्द, मर्म र भावनाअनुसार काम गर्छ । त्योभन्दा दायाँबायाँ उसले केही पनि गर्दैन भन्ने कुरामा जनताले विश्वास गर्छन् । त्यसकारण त्यहाँ धेरै प्रश्नहरु उठ्दै उठ्दैनन्, कसैले सोध्दैन पनि । तर सोध्दैन भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्ना क्रियाकलाप सार्वजनिक नगरिकन बस्न मिल्दैन ।
त्यसैका लागि त्यहाँ सूचना अधिकारी, प्रवक्ता, प्रेस सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकारहरु राखिएको छ । त्यहाँ धेरै मानिसको ठूलो टिम छ । यो टिम जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि राखिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर, पत्रकारलाई ब्रिफिङ गरेर वा सूचना निकालेर जानकारी दिनुपर्छ । जनताको कुनै पनि खालको जिज्ञासा छ भने प्रेस मार्फत राष्ट्रपति संस्थाले ती आफ्ना क्रियाकलापलाई जनतासामु राख्नुपर्छ ।
सरकार गठनका लागि पहिला राष्ट्रपति कार्यालयले पर्याप्त समय दिएको पाइन्छ । किनभने नयाँ सरकार गठन व्यावहारिक प्रश्न पनि हो । त्यसमाथि पनि गठबन्धन सरकार गठन भनेको व्यावहारिक राजनीतिको कुरो हो । त्यहाँ विभिन्न पार्टीहरुसँग बैठक गर्नुपर्छ, अन्तरपार्टी संवाद हुनुपर्छ । पहिला कहिले समय थप्दाथप्दै १० दिनसम्म पनि पुगेको नजीर छ । शुरुमा ३–४ दिन दियो, त्यसपछि फेरि थप्यो, पार्टीहरुले अनुरोध गरेपछि फेरि थपिएका उदाहरण छन् ।
तर, यसपल्ट २४ घण्टाभन्दा कम समय दिएको जुन कुरा छ, विगतमा यति थोरै समय दिएको दृष्टान्त छैन । २४ घण्टा भन्दा कम समय दिएको विषय अस्वाभाविक लागेको छ ।
यत्रो सरकार गठन गर्नुपर्छ त्यसपछि नेकपाभित्रको राजनीतिक विग्रहको कारणले गर्दा संकट पैदा भएको हो, अहिले अरु कुनै कारण होइन । न प्रतिपक्षले केही गरेको हो, न अर्काे कुनै पार्टीले केही गरेको हो ।
स्वयं सत्तासीन पार्टीभित्रको विग्रहले गर्दा उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधान गर्नका लागि दिइएको समय २४ घण्टा भन्दा कम हुनु शंकास्पद विषय हो । यसको आशयमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
यो किन गरेको, कसलाई सोधेर गरेको ? के आधारमा गरेको ? राष्ट्रपति कार्यालय विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हो, किनभने संविधानको धारामा नै यी सबै विषय लेखिएको हुँदैन । त्यही राष्ट्रपति कार्यालयको १० वर्षयताको पूर्व नजिरहरु हेर्ने हो भने त्यस्तो त पाइँदैन ।
(प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
!-- .entry-content --> प्रकाशित मितिः शुक्रबार, जेष्ठ ७, २०७८ 8:39:22 PM
Prevघर भत्किँदा एक महिलाको मृत्यु
Next१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी
नमराज सुवेदी (नेपालगन्ज)
रत्न भण्डारी (हुम्ला)
सन्दीप विक (दैलेख)
सौगात सञ्चार प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित paschimnepal.com सूचना तथा प्रसारण विभागकाे दर्ता प्रमाणपत्र १४६४।०७६।०७७ मा दर्ता भएको अनलाइन न्युजपोर्टल हो ।मुख्य कार्यालय: वीरेन्द्रनगर–६ वुद्धपथ सुर्खेत/शाखा कार्यालय नारायण नगरपालिका दैलेख/ फोनः ०८३-५२५६२४, ९८५११७३७२९, ९८४८०६३७२९, E-mail: news@paschimnepal.com
Copyright © 2022 reserved with paschimnepal.com